अन्धविश्वासको कारण जे भयो त्यसले दुनियाँलाई नै झस्कायो ! – Khabaarpati
October 23, 2020 goodmamLeaveaComment on अन्धविश्वासको कारण जे भयो त्यसले दुनियाँलाई नै झस्कायो !
काठमाडौं । विश्वास र अन्धविश्वास दुई फरक कुराहरु हुन् । अन्धविश्वासका कारण विनाकारण नसोचेको क्षति हुन सक्छ । यो बीचमा भारत, मध्य प्रदेशको पन्ना जिल्लामा अन्धविश्वासको कारण जे भयो त्यसले सबैलाई हैरान बनाएको छ ।
एक महिलाले देवीलाई प्रसन्न तुल्याउन आफ्नो २४ वर्षको छोराको ब’लिचढाएकी छिन् । उनले आफ्नो छोरा निदाएको समयमा यो सब कतुर्त गरेकी हुन् । यो घटना बिहीबार (आज) बिहान सबेरै कोतवाली प्रहरी चौकी क्षेत्र अन्तर्गत कोहनी गाउँमा भएको हो ।
घटना पछि उक्त सनसनी फैलिएको छ र भारी संख्यामा प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ । पन्ना कोतवाली प्रहरी चौकी इन्चार्ज अरुण सोनीले आज बिहान ५ बजे आसपास प्रहरीलाई सूचना प्राप्त भएको थियो जानकारी दिएका छन् । कोहनीको गाउँकी झण्डै ५० वर्षीया सुनियाबाई लोधीले उनको २४ वर्षीय छोरा द्वारका लोधीलाई ब’लिचढाएको खबर आएको छ ।
इन्चार्ज अरुणले भने, ‘सुनियाबाईले विगत दुई वर्षदेखि केही ईश्वरीय प्रभाव महसुस गरेकी थिइन । त्यस्तै घटना आज बिहान पनि भयो । यस्तै अवस्थामा उनले आफ्नो छोरा द्वारका लोधीलाई जी’वन लि’इन् ।’ सोनीले भने कि कानूनी कारबाहीपछि लाशको परीक्षण भइरहेको छ । उनले आरोपी महिलालाई पक्राउ गरेर सोधपुछ भइरहेको जानकारी दिएका छन् । प्रहरीले घटनामा प्रयोग भएको सामाग्री पनि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जब उनलाई कुनै देवीलाई ब’लिचढाएको हो कि भनेर प्रश्न गरियो । उनले भनिन, ‘सुरुमा यो कुरा थाहा पाएको थियो कि उनले यी भावनाहरु राखीरहेकी थिईन् र त्यस्तै भावना भएमा उनी भन्छिन् कि यो केटाको अन्त्य हुनै पर्छ । त्यो जसरीपनि सकिनै पर्छ ।’ गाउँलेहरूले पनि आज यो कुरा बताएका छन् । यो कुरा गरेर अगाडि जाने प्रहरीको तयारी रहेको छ ।
सोनीले भने, ‘यस सम्बन्धमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ र विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ यसैबीच कोहनी गाउँका राम भगतले मिडियालाई भने, ‘सुनियाबाईले उनको बच्चाको जी’वन लि’इन् । उनी देवी माताको रुप धारण गर्थिन र म ब’लिदा’नलि’न्छु भन्थिन् । उनले रातमा आफ्नो बच्चाको जी’वन लि’इन् ।’
उनले भने, ‘घटनाको समयमा सुनियाबाई, उनका पति र छोरा उनको घरमा थिए । उनका पति र छोरा सुतिरहेका थिए । राती सुनिया बाईले घरेलु सामाग्री लिएर उनको छोराको जी’वन लि’इन् ।’
उनले पनि आफ्नो छोराको जी’वन लि’एर आफ्नो लोग्नेलाई हेर, मैले आफ्नो काम गरे भनेर देखाएको पनि बताइएको छ । उनले मैले आज देवीको इच्छा पुरा गरे गएर बच्चा हेर भन्दै श्रीमानलाई भनेको खुल्न आएको छ । News Source
भारतमा विकराल अवस्था : अक्सिजनको अभावबीच भारतमा संसारमै सबैभन्दा बढी दैनिक सङ्क्रमण पुष्टि
चर्चित बलिउड अभिनेत्रीको लाश आफ्नै बेडरुममा यस्तो अवस्थामा फेला पर्यो
December 13, 2020 December 13, 2020 Khabar Pati